Baahi loo qabo xubin yabooha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qof maskaxda ka dhintay oo maro ku dadan oo xubno yabooh loo qali doono. sawir: Whitney Curtis
Baahi loo qabo xubin yabooha
Toddobaadka xubin yabooha ee hayadda hoggaanka bulshada
La daabacay måndag 9 oktober 2017 kl 14.20
Ma doonaysaa inaad ku yaboohdo xubnahaaga geerida dabadeed? Waa su’aal uu hoggaanka maamulka bulshado doonayo inaad kala xaajooto ehelkaaga toddobaadkan eynu ku jirno.
Sida xaaladdu iminka tahay ayey 15% bulshada Sweden isku diiwaan-gelisay inay diyaar u tahay inay xubnahooda yaboohdo.
Waxaa jira suurtagalka ah in la iska diiwaan-geliyo liiska hoggaanka bulshada (socialstyrelsen) oo lagu caddeeyo inaad doonayso ama aadan doonayn inaad xubnahaaga yaboohdo geeri dabadeed. Iyadoona ey liiska hoggaanka bulshada iska diiwaan-geliyeen illaa hadda dadyoow gaarsii-san 1 570 222, kuwaasina 73% sheegeen in xubnahooda ey yaboohaan geerida dabadeed, halka 27% qeexeen in aaney dooneyn.
Si haddaba hoggaanka bulshadu ugu dhiiri geliso tiro intaa ka badan liiska diiwaanka xubin-yabooha ayuu isniinta maanta bilaabay ololihii sannadlaha ee toddobaadka xubin yabooha.
-Xaaladdu sida ay maanta tahay waa inuu shakhsigu hab mucayin ah u geeriyoodaa si xubnihiisa loo isticmaali karo, haddii uu ku yaboohay. Sidaa daraadeed waa dad aad u yar cidda xubnahooda laga faa’iideey-san karo, waana midda keentay baahida ballaaran ee ka aloo-san xubin yabooha, sida ay sheegtay Wenche Stribolt, ahna baare ka howl-gala hoggaanka bulshada - Socialstyrelsen.
Inuu bukaan socod lagu daryeelayay mashiinno uu ku neefsado (respirator) u geeriyoodo waxa loo yaqaanno infarkt (xubinta oo u geeriyoota dhiig ku filan oo aan gaarin), hase yeeshii xubnihii kale ey dhiig helaan xitaa haddii uu shakhsigu geeriyooday, lagana faa’iideey-san karo xubnihiisa.
-Qiyaastii 3 500 ayaa sannadkii ina dhaafay goobaha daryeelka caafimaadka si is daba joogga ugu geeriyooday habkaa. 185 ka mid ah ayey suurtagal noqotay in xubnahooda cid kale loogu yabooho. Waxaa loo baahan yahay in laga faa’iideeysto dhammaan xubnahaasi oo aan midna la khasaarin, sida ay sheegtay Wenche Stribolt.
In xigtada lagala xaajoodo
Cid walba oo doonaysa inay xubnaheeda yaboohdo ama aan doonayn waxay rabitaankeeda ku qeexi kartaa bogga diiwaanka hoggaanka bulshada ama ay kala xaajoon kartaa fikirkeeda qaraabada (qoyska, walaalaha ama ilmaha).
Si kastaba ha ahaatee waxaa wanaag-san in qaraabada lagala xaajoodo oo lagu war-geliyo halka su’aashaa laga taagan yahay. In la dooneyo xubnaha in la yabooho iyo in kale, maadaama qaraabada la weeydiiyo kolka uu ruuxu geeriyoodo, sida ay sheegtay Wenche Stribolt, ahna baare ka howl-gasha hoggaanka bulshada - Socialstyrelsen.
Ma ku yaboohi lahayd xubnahaaga?